FARITRA ANOSY SY ANDROY : Dahalo am-polony lavon’ny bala, tsy afaka manohy ny asa ratsiny intsony
Vokatry ny asan-dahalo misesisesy ao amin’ny Faritra Anosy sy Androy hatramin’izay ka hatramin’izao dia nisy ny fiaraha-mientana nataon’ny zandary avy amin’ny Fign ao amin’ny Usad Betroka sy ny Usad Mahabo ary nahazahoana loharanom-baovao fa nahitana fahombiazana izany. 10 octobre 2017
Fantatra àry fa dahalo miisa folo eo no lavo tsy tafarina intsony tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Fantatra ihany koa fa am-polony ireo dahalo naratra nandritra ny fifandonana ary tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo omby halatra rehetra tany amin’izy ireo. Raha tsiahivina dia ny alin’ny 4 oktobra 2017 lasa teo dia dahalo manodidina ny 40 isa mirongo basy FC no nanafika ny tanànan’Ampatrimaro, Kaominina Mahaboka ka omby miisa 50 no lasan’izy ireo tamin’izany ary mbola narahana vava nanao hoe “antsoy ny Usad -nareo fa tsy atahoranay”.
Ny marainan’ny 5 oktobra 2017 efa tamin’ny 6 ora vao nandre an’io fanafihana io ny Usad, ka tsy niandry andro intsony fa nifampitaona tamin’ireo zandary avy ao Mahabo sy ny mponina ary niroso tamin’ny fanarahan-dia sy ny sakan-dalana. Tsy ela fa tokony ho tamin’ny 12 ora sy 30 minitra dia efa nifankatratra ny roa tonta ka velona ny fifandonana. Nihamaro ireo dahalo, nisy ireo naratra no nalefan’ny namany nialoha lalana, nisy ireo niala an-daharana nahita ny namany lavo ka rehefa tamin’ny 2 ora tany ho any dia efa tsy nisy hita teo intsony izy ireo fa niporitsaka nanararaotra ny fahaizany ny toerana.
Rehefa natao ny famotorana sy ny fizahana azy ireo dia misy maromaro tamin’izy ireo no efa nokarohina hatramin’ny elaela, raindahiny amin’ny fampahoriana vahoaka tany amin’iny faritra Anosy sy Androy iny. Ireo ihany koa no nanao fihantsiana ombieny ombieny fa tsy matahotra ny Usad ary nilaza fa mbola hifankahita aminy mihitsy aza ireo zandarin’ny Fign ireo. Mbola lasan’ireo tafatsoaka kosa anefa ny basin’ ireo dahalo tratra ireo.
Tavela teo ary efa lasan’ny tompony manontolo ny omby miisa 44 tamin’ireo 50 nangalarina. Ny 6 moa dia notifirin’ireo dahalo sasany talohan’ny handosirany noho ny hatezerany. Manoloana izay dia naneho ny hafaliany ireo mponina rehefa sarona ireo dahalo raindahiny ireo satria mijaly noho ny tsy fandriam-pahalemana loatra ny vahoaka. Mitohy hatreto ny asa famongorana dahalo ataon’ireto zandary any amin’iny faritra iny ka na inona na inona ramatahora sy fihantsiana ny zandary dia miezaka tsy maintsy manatanteraka ny asany izy ireo.
Misy koa ireo zandary sasany no voalaza fa miray tsikombakomba amin’ny andian-dahalo ka mbola misokatra ny fanadihadiana momba izay raharaha izay amin’izao fotoana izao.